LED မီးတွေဟာ မျက်စိကွယ်တဲ့အထိ အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်...! - Thadin
HomeHEALTHYLED မီးတွေဟာ မျက်စိကွယ်တဲ့အထိ အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်…!
LED မီးတွေဟာ မျက်စိကွယ်တဲ့အထိ အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်…!
May 19, 2019 Kay Kay HEALTHY, KNOWLEDGE Comments Off on LED မီးတွေဟာ မျက်စိကွယ်တဲ့အထိ အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်…!
LED မီးတွေဟာ မျက်စိအမြင်လွှာကို တစ်သက်စာပျက်စီးနိုင်ပြီး သဘာဝအတိုင်း အိပ်စက်မှုကိုလည်း အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ သိရပါတယ်။ ပြင်သစ် အစားအသောက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ လုံခြုံရေးအေဂျင်စီ ANSES က စွမ်းအားပြည့်ဝတဲ့ LED မီးတွေဟာ အမြင်အာရုံကို အဆိပ် အတောက်ဖြစ်စေကြောင်း သတိပေးပြောကြားခဲ့တာပါ။
စာမျက်နှာ ၄၀၀ ရှိတဲ့ အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ LED မီးတွေဟာ အမြင်လွှာဆဲလ်တွေကို ပျက်စီးစေပြီး မျက်စိ အမြင်ကွယ်သွားတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ LED ဖုန်း၊ Tablet နဲ့ Laptop ဖန်သားပြင်တွေဟာ မျက်စိ ထိခိုက်စေတာမှန်ပေမဲ့ ကားရှေ့မီးတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ အလင်းအားပြင်းတဲ့ မီးကြီးတွေကတော့ မျက်စိအမြင် အာရုံကို ပိုမိုကြီးမားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာမှာ သိပ်သည်းဆများတဲ့ LED မီးကို စူးရှအောင် ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သိပ်သည်းဆနည်းတဲ့ မီးကို အချိန်ကြာကြာဖွင့်ထားတာရဲ့ ကြားက ကွဲပြားခြားနားချက်ကို လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ အန္တရာယ်ဖြစ်တာနည်းပါး နိုင်ပေမယ့် မီးကိုကြာကြာဖွင့်ထားတာဟာ အမြင်လွှာဆဲလ်တွေကို အိုမင်းရင့်ရော်နှုန်း မြန်ဆန်စေပြီး အမြင်အာရုံ ကို အားနည်းသွားစေပါတယ်။
ကြာရှည်ခံပြီး စွမ်းအင်ပြည့်ဝသလို ဈေးလည်းမကြီးတဲ့ LED နည်းပညာဟာ ဈေးကွက်မှာ ခေတ်စားလာတာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာလောက် ကြာခဲ့ပါပြီ။ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေကလည်း နောက်နှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်း အထိ LED မီးရဲ့ ရောင်းအားဟာ ဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်ပြီး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ထိပ်တန်းရောက်နေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
LED မီးတွေကို အိမ်တွေနဲ့ လမ်းတွေမှာ အသုံးပြုကြပြီး ရုံးခန်းနဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာလည်ညး အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ကားမီးတွေ၊ ဓာတ်မီးတွေနဲ့ တချို့ကစားစရာအရုပ်တွေမှာလည်း အသုံးပြုမှုများပြားလာပါတယ်။ ဖုန်း၊ Tablet နဲ့ Laptop တို့ရဲ့ LED ဖန်သားပြင်အလင်းအားဟာ တခြားမီးအမျိုးအစားတွေက LED မီးအလင်းအား ထက်စာရင် ပိုနည်းတာကြောင့် မျက်စိအမြင်အာရုံကို ထိခိုက်မှုပိုနည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မီးအလင်းရောင် ကောင်းကောင်းမရတဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အိပ်စက်ခြင်းအပါအဝင် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ANSES ဟာ ကားထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ အရမ်းတောက်ပလွန်းတဲ့ ကားရှေ့မီးတွေရဲ့ အလင်းအား သိပ်သည်းဆကို အကန့်အသတ်ထားသင့်ကြောင်းလည်း ထုတ်ဖော်သတိပေးထားပါတယ်။ LED မီးမှာ ပါဝင်တဲ့ အပြာရောင်အလင်းက အရေပြားရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအလွှာအထိ ထိခိုက်စေနိုင်သလို မျက်စိအမြင်အာရုံကိုလည်း ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေပြီး မျက်စိကွယ်တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
LED မီးတှဟော မကျြစိအမွငျလှာကို တဈသကျစာပကျြစီးနိုငျပွီး သဘာဝအတိုငျး အိပျစကျမှုကိုလညျး အနှောငျ့အယှကျ ဖွဈစတေယျလို့ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ သိရပါတယျ။ ပွငျသဈ အစားအသောကျ၊ ပတျဝနျးကငျြ၊ ကနျြးမာရေးနဲ့ လုံခွုံရေးအဂေငျြစီ ANSES က စှမျးအားပွညျ့ဝတဲ့ LED မီးတှဟော အမွငျအာရုံကို အဆိပျ အတောကျဖွဈစကွေောငျး သတိပေးပွောကွားခဲ့တာပါ။
စာမကျြနှာ ၄၀၀ ရှိတဲ့ အစီရငျခံစာတဈခုအရ LED မီးတှဟော အမွငျလှာဆဲလျတှကေို ပကျြစီးစပွေီး မကျြစိ အမွငျကှယျသှားတဲ့အထိ ဖွဈနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ LED ဖုနျး၊ Tablet နဲ့ Laptop ဖနျသားပွငျတှဟော မကျြစိ ထိခိုကျစတောမှနျပမေဲ့ ကားရှမေီ့းတှမှော အသုံးပွုတဲ့ အလငျးအားပွငျးတဲ့ မီးကွီးတှကေတော့ မကျြစိအမွငျ အာရုံကို ပိုမိုကွီးမားစှာ ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
အစီရငျခံစာမှာ သိပျသညျးဆမြားတဲ့ LED မီးကို စူးရှအောငျ ဖှငျ့လိုကျတာနဲ့ သိပျသညျးဆနညျးတဲ့ မီးကို အခြိနျကွာကွာဖှငျ့ထားတာရဲ့ ကွားက ကှဲပွားခွားနားခကျြကို လလေ့ာခဲ့ကွပါတယျ။ အန်တရာယျဖွဈတာနညျးပါး နိုငျပမေယျ့ မီးကိုကွာကွာဖှငျ့ထားတာဟာ အမွငျလှာဆဲလျတှကေို အိုမငျးရငျ့ရျောနှုနျး မွနျဆနျစပွေီး အမွငျအာရုံ ကို အားနညျးသှားစပေါတယျ။
ကွာရှညျခံပွီး စှမျးအငျပွညျ့ဝသလို ဈေးလညျးမကွီးတဲ့ LED နညျးပညာဟာ ဈေးကှကျမှာ ခတျေစားလာတာ ဆယျစုနှဈတဈခုစာလောကျ ကွာခဲ့ပါပွီ။ လုပျငနျးဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြသူတှကေလညျး နောကျနှဈ နှဈကုနျပိုငျး အထိ LED မီးရဲ့ ရောငျးအားဟာ ဆကျလကျမွငျ့တကျနိုငျပွီး ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျ ထိပျတနျးရောကျနဦေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
LED မီးတှကေို အိမျတှနေဲ့ လမျးတှမှော အသုံးပွုကွပွီး ရုံးခနျးနဲ့ လုပျငနျးတှမှောလညျညး အသုံးပွုပါတယျ။ ဒါ့ပွငျ ကားမီးတှေ၊ ဓာတျမီးတှနေဲ့ တခြို့ကစားစရာအရုပျတှမှောလညျး အသုံးပွုမှုမြားပွားလာပါတယျ။ ဖုနျး၊ Tablet နဲ့ Laptop တို့ရဲ့ LED ဖနျသားပွငျအလငျးအားဟာ တခွားမီးအမြိုးအစားတှကေ LED မီးအလငျးအား ထကျစာရငျ ပိုနညျးတာကွောငျ့ မကျြစိအမွငျအာရုံကို ထိခိုကျမှုပိုနညျးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မီးအလငျးရောငျ ကောငျးကောငျးမရတဲ့ နရောမှာ အသုံးပွုမယျဆိုရငျတော့ အိပျစကျခွငျးအပါအဝငျ ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျတှကေို အနှောငျ့အယှကျဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
ဒါ့ပွငျ ANSES ဟာ ကားထုတျလုပျသူတှအေနနေဲ့ အရမျးတောကျပလှနျးတဲ့ ကားရှမေီ့းတှရေဲ့ အလငျးအား သိပျသညျးဆကို အကနျ့အသတျထားသငျ့ကွောငျးလညျး ထုတျဖျောသတိပေးထားပါတယျ။ LED မီးမှာ ပါဝငျတဲ့ အပွာရောငျအလငျးက အရပွေားရဲ့အနကျရှိုငျးဆုံးအလှာအထိ ထိခိုကျစနေိုငျသလို မကျြစိအမွငျအာရုံကိုလညျး ဆိုးရှားစှာ ထိခိုကျစပွေီး မကျြစိကှယျတဲ့အထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရင် အတိုက်ခံရသူ သေဆုံးသွားသည့်တိုင်အောင် ထွက်မပြေးပဲ ဒီအတိုင်းဆက်လုပ်ပါ…!
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်တွင် အရက်သမားများ၏ အလှူငွေဖြင့် စေတီတည်…!
This Month : 18536
This Year : 272006
Total Users : 631030
Total views : 2954507